Dhacdo layaab leh oo ka yaabisay shacabka ku dhaqan magaaladda Marka oo ka dhacday magaalada Marka
» Dhacdo layaab leh oo ka yaabisay shacabka ku dhaqan magaaladda Marka oo ka dhacday magaalada Marka
Dhacdo Layaable oo Ka Dhacday Magaalada Marka Yaab iyo Infirri Bal Aqri Qoraalkaan Dhacdadaan oo ka yaabisay shacabka ku dhaqan magaaladda Marka ayaa waxaa dhacday gudaha magaaladda Marka, iyadoo uu ku kacay Gudoomiyaha Maamulka Xarakada Al Shabaab ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
Waxaa magaaladda Marka ku noollaa nin ay reer Marka u yaqaaneen Jamaal Bisha Cas, kaasoo madax ka ahaa hay’adda Bisha Cas laanteeda magaaladda Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose, wuxuuna lahaa xaas iyo dhawr caruur ah oo ay u dhashay.
Kolkii Xarakada Al Shabaab ay sanadkii 2009-kii Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose ay u soo magacawday Sheekh Maxamed Abuu Cabdalla, ayaa wuxuu soo dagay qeybta sare ee gurigii uu ku noollaa Jamaal Bisha Cas.
Muddo gaaban kadib ayaa wuxuu Jamaal Bisha Cas uu isku arkay xaaskiisa iyo Gudoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Sheekh Maxamed Abuu Cabdalla oo dacalka isku haaya, taasoo ka yaabisay Jamaal Bisha Cas, isla-markaana wuxuu garwaaqsaday in uu iska furo xaaskiisa.
Iyadoo aysan cudada u dhamaan xaaskii uu furay ayaa waxaa guursaday Gudoomiyaha Maamulka Xarakada Al Shabaab ee Gobolka Shabeellaha Hoose Sheekh Maxamed Abuu Cabdalla, taasoo anfariir ku riday shacabka ku dhaqan magaaladda, bacdamaa ninka dhacdadaasi ku kacay uu dadka ku qasbo inay tukadaan, laakiin aanan fiirin qaladaadka uu faraha kula jiro.
Muddo kadib ayuu Jamaal uu iskaga soo tagay magaaladda Marka, waxaana jiray dhawr caruur ah oo ay u dhashay xaaskii ay kala tageen, isla-markaana caruurtaasi qaarkood ayuu Abuu Cabdalla uu ku daray ciidamadda Xarakada Al Shabaab, iyadoo mid kamid ah uu seddex cisho kahor kala jarjaray madfac culus, kadib kolkii ay Shabaab dagaalo xoogan la-galleen dhinacyada uga soo horjeeda dalka.
Arinta kale ee ka yaabisay shacabka ku dhaqan magaaladda Marka ayaa waxay tahay in Abuu Cabdalla uu caruurtii Jamaal Bisha Cas uu u diray Jihaad, halka wiil qaan-gaar ah oo uu dhalayna uu dugsi sare ka dhigto iskuul ku yaalla magaaladda Marka Cadey.
Dhinaca kale kolkii uu Jamaal Bisha Cas uu maqlay in mid kamid ah caruurtiisa uu kala jar jaray madfac ayaa waxaa la-sheegay in ay lasoo daristay xaalad adag, isla-markaana wuxuu noqday mid miir beelay “Koomo ku jira”, ilaa hadase lama oga waxa ay ku dambeen doonto mustaqbalka dhaw ee nolosha Jamaal Bisha Cas oo ay si weyn u garanayaan shacabka ku dhaqan magaaladda Marka ee Gobolka Shabeellaha Hoose.
nasra8/02/2011asc walaalyaal waxaan idin waydiinaa su laah marka aniga iyo ninkayga aan galmo samayno waxaa iga soo laabta ama soo daado biyaha ninka oo banaanka u soo maxa anigana waxaan rabaa inaan uur qaado hadii ilaahay i siinaayo marka maxaan sameeyaa wa mahad santihiinReplyDeleteRG8/02/2011Kuma xirna uurka biyaha oo badan ama yar waxaa ku filan wax yar dhibic ah inay meesha galaan haddii Alle uu ugu talagalo inay haweeneydu uur qaado wax celin kara ma jiran, biyaha soo daadanaya ma keenaan uur la'aan saan sheegnay in yar ayaa ku filan, marka isku daya inaad galmo samaysaan xiliyada dhiigga soo dhowyahay ama markuu go'o dhowr maalmood kaddib, galamada ha ahaato dabiici naagta inay ka hoos marto ninka Ilaahay ayaan kaaga rajaynaynaa ubad wanaagsanReplyDeleteAdd commentLoad more...